IOS နှင့် Android အွန်လိုင်း စတိုး များတွင် အီလက်ထရောနစ် RMB အက် ပလီကေးရှင်း ကိုစတင် ခဲ့သည် - Pandaily
IOS နှင့် Android အွန်လိုင်း စတိုး များတွင် အီလက်ထရောနစ် RMB အက် ပလီကေးရှင်း ကိုစတင် ခဲ့သည်
Jan 04, 2022, 18:58ညနေ 2022/01/07 09:36:38 Pandaily
“အီလက်ထရောနစ် RMB (ရှေ့ပြေး) လျှောက်လွှာ“အဓိက အင္တာနက္ အက္ ပလီ ေကး ရွင္း စတိုး ေတြမွာ စတင္ အသံုးျပဳ ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီ ေရွ႕ေျပး ဗား ရွင္း ဟာ e-CNY (China Digital Fiat Money) ရဲ႕ ကနဦး ပေရာ ဂ်က္ ေတြကို လူတစ္ဦး ခ်င္းစီ အတြက္ တရားဝင္ ၀န္ေဆာင္မႈ ပလက္ ေဖာင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္၊ e-CNY ပိုက္ဆံ အိတ္ ေတြ ဖြင့္ ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲ ႏိုင္ ဖို႔နဲ႔ e-CNY ရဲ႕ လဲလွယ္ မႈနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴး မႈ စတဲ့ ၀န္ေဆာင္ မႈေတြကို ေပးႏိုင္ ပါတယ္လို႔ တာ၀န္ရွိ သူေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါတယ္။
Electronic Renminbi ဆိုသည်မှာ တရုတ်ပြည်သူ့ ဘဏ် မှထုတ်ပေး သော တရားဝင် တင်ဒါ ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် ဗားရှင်း ဖြစ်ပြီး တရားဝင် အော်ပရေတာ များမှ လည်ပတ် ။ လဲလှယ် သည်။ ၎င်း၏ တန်ဖိုးသည် ငွေစက္ကူ နှင့် ဒင်္ဂါး များနှင့် ညီမျှ သည်။ Bitcoin နှင့်မတူ သည်မှာ တရုတ်၏ e-CNY သည် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပုံစံဖြင့် တရားဝင် တင်ဒါ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အမှန်တကယ် တန်ဖိုး ရှိပြီး လက်ခံ သောအခါ ငြင်းပယ် ။ မရပါ။
လက္ရွိမွာေတာ့ e-CNY အက္ ပလီ ေကး ရွင္း မွာ ေဖာ္ျပ ထားတဲ့ ေရွ႕ေျပး ၿမိဳ႕ႀကီး ေတြထဲမွာ ရွန္ က်န္း ၊ စူ က်ိဳး ၊ ရွန္ အန္း ၊ ခ်န္ ဒူး ၊ ရွန္ ဟိုင္း ၊ ဟုိင္ နန္ ၊ ခ်န္ ရွာ ၊ ရွီ ယန္ ၊ Qingdao ၊ ဒါ လီ ယန္ နဲ႔ ေပက်င္း ေဆာင္း ရာသီ အုိ လံ ပစ္ ပြဲေတာ္ ျမင္ကြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး (ေပက်င္း ၊ Zhangjiakou စတဲ့ ေနရာေတြ အပါအဝင္) ပါဝင္ပါတယ္။ အသုံးပြုသူသည် တည်နေရာ ပေါ် မူတည်၍ မှတ်ပုံတင်ခြင်း လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီ မှုရှိမရှိ ဆုံးဖြတ် ရန်လိုအပ်သည်။
လက်ရှိတွင် Digital RMB သည် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ် ၏စမ်းသပ် အဆင့်တွင် ရှိနေ သေးသည်။ လေယာဉ်မှူး များနှင့် ရှေ့ပြေး မြင်ကွင်း များတွင် အော်ပရေတာ များမှ တီထွင်ထားသော အဖြူရောင် စာရင်း အသုံးပြုသူများသည်eCNY app တွင် မှတ်ပုံတင် နိုင်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်အထိ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ဖြင့် ရှေ့ပြေး မြင်ကွင်း ပေါင်း ၃. ၅ သန်းကျော် ရှိခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ရှေ့ပြေး မြင်ကွင်း ပေါင်း သန်း ၁၄၀ ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ငွေပေးငွေယူ ပမာဏ သည်ယွမ် ၅၆ ဘီလီယံ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် တရုတ်ပြည်သူ့ ဘဏ် က သူ့ရဲ့ e-CNY အပလီကေးရှင်း ဟာ ဘဏ် အပ်ငွေ တွေနဲ့ ပြိုင်ဆိုင် မှုကို လျှော့ချ ဖို့အတွက် အတိုး မပေးဘဲ e-CNY ရဲ့ M0 (Cash in Circulation) တည်နေရာ ကို စွဲကိုင် ထားတယ်လို့ အစောပိုင်း သတင်းတွေ မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒုတိယ အချက်က e-CNY App ဟာ နှစ်ဆင့် Operating System ကို အသုံးပြု ထားပါတယ်။ စနစ် အရ တရုတ်ပြည်သူ့ ဘဏ် သည် ငွေကြေး ထုတ်ပေး မှုနှင့် ငွေကြေး ပေါ်လစီ များ ကိုထိန်းညှိ နိုင်စွမ်း ရှိ စေရန် ဗဟို မှ စီမံခန့်ခွဲမှု ကိုအကောင်အထည်ဖော်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် စီးပွားဖြစ် ဘဏ် များကဲ့သို့သော ငွေပေးချေမှု အေဂျင်စီ များသည် အများပြည်သူ အတွက် အီလက်ထရောနစ် RMB ကို လဲလှယ် ရန်နှင့် ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန် ကြားခံ အဖြစ်ဆောင်ရွက် သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Tencent သည် တရားမဝင် cryptocurrency လှုပ်ရှားမှုကို ခုခံ တွန်းလှန် ရန် NFT အမည် ပြောင်း ခြင်းကို တုံ့ပြန် သည်
ထို့အပြင် အီလက်ထရောနစ် RMB ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ RMB နှင့် အပြိုင် ထုတ် ပေးလိမ့်မည်။ တရုတ်ပြည်သူ့ ဘဏ် သည် စာရင်းအင်း များ၊။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ RMB သည် အီလက်ထရောနစ် RMB နှင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အတူ ယှဉ်တွဲ နေထိုင် လိမ့်မည်။
ဒါ့အပြင် e-CNY အပလီကေးရှင်း မှာ ပိုက် ဆံအိတ် လက်ကျန်ငွေ ကန့်သတ် ချက်နဲ့ ငွေ သွင်း ငွေထုတ် ငွေပမာဏ ကန့်သတ်ချက် စတဲ့ စည်းမျဉ်း တွေ ချမှတ် ထားတာကြောင့် ထွက်ပြေး မှု အန္တရာယ် ကို အနည်းဆုံး ဖြစ် စေပါတယ်။
“ဟောင်ကောင် ဘဏ္ဍာရေး နည်းပညာ ရက်သတ္တပတ် ၂၀၂၁” တွင် တရုတ်ပြည်သူ့ ဘဏ် ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေကြေး ဆိုင်ရာ သုတေသန ဌာန ဒါရိုက်တာ မူ ချန် ချွန်း ၏ e-CNY App အဆင့် စမ်းသပ်မှု တိုးတက်မှု အချက်အလက် အရ ၂၂-၁၀-၂၀၂၁ တွင် e-CNY ကိုယ်ပိုင် ပိုက် ဆံအိတ် ပေါင်း သန်း ၁၄၀ ကို ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပြီး ကော်ပိုရိတ် ပိုက် ဆံအိတ် ပေါင်း ၁၀ သန်းကို ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း အရောင်းအဝယ် ပေါင်း သန်း ၁၅၀ ကို ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပြီး အရောင်းအဝယ် ပမာဏမှာ ယွမ် ၆၂ ဘီလီယံ နီးပါး ရှိသည်။ လက်ရှိတွင် ကုန်သည် ၁. ၅၅ သန်း သည် e-CNY ပိုက် ဆံအိတ် ငွေပေးချေ မှုကို အများပြည်သူ သုံး အသုံးအဆောင် များ၊ စားသောက်ကုန် လုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စျေးဝယ် ခြင်း၊။
Quanxin Technology သည် FICC အရောင်းအ ၀ ယ် များ ကိုအာရုံစိုက် ပြီး Round B ရန်ပုံငွေ တွင် ယွမ်သန်း ၁၀၀ ကျော် ရရှိ ခဲ့သည်
ရှန်ဟိုင်း အခြေစိုက် QuantInfo Technology သည် ကုန်သွယ်မှု နည်းပညာနှင့် ၀ န်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယွမ်သန်း ၁၀၀ ကျော် (ဒေါ်လာ ၁၅. ၇ သန်း) တန်ဖိုးရှိသော Round B ရန်ပုံငွေ ပြီးစီး ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။